FBSသည် လာအိုနိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားများအား လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများပေးပို့ခြင်းဖြင့် ကူညီခဲ့ပါသည်
FBSသည် လာအိုရေဘေးဒုက္ခသည်အားလုံးအား ထောက်ပံ့ပေးပြီး၊ ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီပေးပို့ပါသည်.
ဇူလိုင် ၂၃တွင်၊ လာအိုဆည်ပြိုခဲ့ပြီး၊ Attapeu ပြည်နယ်ရှိ ရွာ၆ရွာကိုဖြတ်ပြီး ကြောက်မက်ဖွယ် ရေလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီအဖြစ်ဆိုးကို လစ်လျူရှုပြီးမနေနိုင်သည့်အတွက် ဒုက္ခသည်များကို ထောက်ပံ့ရန် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများပါတဲ့ ထရပ်ကားများ ချက်ချင်းစေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။ မိုးနှင့် ပျက်စီးနေတဲ့လမ်းတွေရှိသော်လည်း ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှ စောင်များ၊ အစားအသောက်များ၊ သောက်ရေနှင့် အဝတ်အစားများအပြည့်ပါတဲ့ အိတ်ကြီးတွေကို စခန်းနှစ်ခုကို ပိုဆောင်ခဲ့ပါသည်။.
လာအိုမှ လူအပေါင်းတို့! FBS အဖွဲ့သည် သင့်အားထောက်ခံပြီး၊ ပြင်းထန်တဲ့သဘာဝရဲ့ ရှေ့မှာ အားအင်ရှိပါစေ ဆုတောင်းပေးပါတယ်! FBS ဟာ အမြဲတမ်း သင့်ဘက်မှာရှိပါတယ်!